Vaka Kambani Kiredhiti Iwe Pachezvako - Bhizinesi Kiredhi Chitupa
Kuvaka bhizinesi kiredhiti kunoda EIN Nhamba. Kungofanana neako wega kiredhiti kiredhiti akavakirwa paNharaunda Yako Yekuchengetedza Nhamba sekuzivikanwa kwako, bhizinesi rako 'kiredhiti chiziviso ichave yakavakirwa pane yako Mutero ID, kana EIN (Federal Employer Chitupa Nhamba) yawakapihwa iwe neiyo IRS. Kana iwe usati uine nhamba yeEIN yebhizinesi rako yauri kuvaka kiredhiti, uchafanirwa kuitora. Makambani Akabatanidzwa anogona kuva neEIN yako nhasi, fonera 1-800-Kambani kuti uwane rumwe ruzivo. Kana iwe wakachinja zita rekambani yako kana uchangobva kuumba bhizinesi rako, unofanirwa kuwana iyo itsva EIN nhamba kubva ku IRS.
Iwe une sarudzo dzinoverengeka pano, kutanga unogona kupedzisa iyo IRS Fomu SS-4 uye utumire iyo kune IRS kuti igadziriswe. Kana iwe unogona shandisa ne IRS online. Dai iwe uine EIN uye wakatsausa nhamba yako, unogona Bata iyo IRS kugadzirisa mamiriro ezvinhu. Ungatofanira kudaro gadziridza kero yako kana ruzivo neIRS kuitira kusimbisa ruzivo rwako rwese rwakarurama usati watanga kuvaka kambani kiredhiti.
Iwe ungangoda kuongorora iyo IRS nongedzo kuti uone kana iwe unoda EIN nyowani usati waenderera mberi.
Chengetedza Bhizinesi Rezvebhizinesi Ruzivo rweKuvaka Chikwereti
Bhizinesi rako rine chimiro nemasangano mazhinji, ayo anosanganisira, iyo nyika iwe yaunosanganisirwa mukati, iyo IRS, bhangi rako uye chero dhairekitori kana 411 marekodhi erubatsiro. Iwe unofanirwa kuona kuti zvese izvi zviri zvechizvino-zvino neruzivo rwezvino uye rwakakodzera. Rangarira kuti kero yako yemutemo zviri pamutemo, haigone kuve PO Bhokisi uye nhamba yefoni yebhizimusi kwete yako pachako kana imba yekumba, saka kana wapedza matanho ekugadzirira izvi zvisati zvaitika, unofanirwa kuona kuti ruzivo rwese rwevhizheni rwakagadziridzwa uye rwunoenderana neruzivo iwe tumira paunenge uchivaka rako bhizinesi rechikwereti.
Mutambo Chaiye Unodikanwa
Ruzivo urwu runofanirwa kuenderana chaizvo pane ese ebhizinesi rako 'ekuzivisa marekodhi uye eanisheni zvinyorwa. Kana rako bhizinesi zita riri "ABC Repair, Inc" uye iwe ukawana ruzivo rwakanyorwa se "ABC Repair Company" kana "ABC Kugadzirisa Nyanzvi", inoda kuchinjwa. Mumwe muenzaniso kero yako, kana iine unit kana suite nhamba, iwo anofanira kunge akafanana, kureva "Suite 700", "# 700", "Unit 700" haana kufanana nechinangwa chekugadzira yako bhizinesi chikwereti chimiro.
Izvo zvinyorwa nevatapi vako vebasa vanofanirwa kuongororwa kuti vaone kuti vane zita chairo rebhizinesi nekero. Izvi zvinosanganisira mabhiri ako ebasa, simba, Internet, runhare, zvekushandisa nezvimwewo zvakakosha kuti zvinhu izvi zviongororwe uye zvigadziriswe kana zvisiri zvechokwadi.
Secretary of State / Corporation Commission - Hofisi yenyika iyo iwe yaunosanganisirwa inofanirwa kuve nerako bhizinesi ruzivo rwezvino. Ichi chinhu chakafanana nekunyora mushumo wegore kana chirevo cheruzivo chinoenda pane ruzhinji rekodhi. Tarisa uone kuti zvinyorwa zvako zvekubatanidza uye zvinyorwa zveveruzhinji zviripo.
IRS Ruzivo - Unogona kubata IRS uye uve nechokwadi chekuti bhizinesi rako ruzivo rwakarurama. Kana iwe uine femu yeCPA inotarisira zvinyorwa zvako, ivo vanofanirwa kukwanisa kugadzirisa ruzivo rwako. Kana iwe uchida kugadzirisa kero yako neiyo IRS, unogona kushandisa IRS Fomu 8832 kuita kudaro.
Positi Hofisi - Unogona kukurumidza gadziridza kero yako neUSPO vachishandisa yavo online mutungamiriri mutungamiriri.
Mamwe maAgency - Vanotora pamudyandigere, maVeterans uye Hofisi yeVashandi Management (OPM) kero shanduko ruzivo inogona kuwanikwa pane Yemagariro Kero Kero Chinja webhusaiti peji.
Dhairekitori uye 411 Rubatsiro - Kana bhizinesi rako rakanyorwa mune chero dhairekitori kana 411 sosi yekubatsira, iwe unofanirwa kuona kuti iine ruzivo rwako rwakavandudzwa zviri pamutemo urikushandisa kugadzira chikwereti chekambani.
Iyo bhizinesi kiredhiti yekuvaka maitiro ichave yakanyorovera neruzivo rwako kuongororwa, kuvandudzwa uye zvazvino. Uine misiyano yakawanda yekutarisa pakuvamba chikwereti chekambani, chikamu chekugadzirira chinofanira kuve chakakwana.
>> Enderera kune Inotevera Nhanho muKuvaka Corporate Kiredhiti - Dun naBradstreet >>